Home Wararka Dibada Maxaa kala qabsaday weriyaha BBC-da Mary Harper iyo haweenkii Soomaalida ahaa ee...
Mar kasta oo aan tago caasimadda Kenya ee Nairobi, saaxiibtay Suheyba waxay igula kulantaa xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Islii – oo loo yaqaan “Muqdishada yar”. Qado hilib geel ah ka dib, waxaan aadnaa goobta la isku qurxiyo ee xinnahana lagu marsado – koofeerka ama saaloonka.
Kii ugu dambeeyay ee aanu tagnay waxa uu la ekaa armaajada oo kale, daah yar oo khafiifa oo jeexjeexan ayaana ka soocayey waddada sawaxan ka badan ee agtiisa maraysay.
Markaad se gudaha u gasho, wax kastaa wuu ka duwan yahay muuqaalka guud ee dibadda.
Bulshooyinka filashoodu tahay in dumarku is asturaan oo aamusnaadaan, goobaha la isku qurxiyaa waa meel ay ku nafisaan oo ay kaga soo dhuuntoodaan bulshadooda u afduuban ragga.
Waana wax badanaa dhaca in goobahani sidaa iska noqdaan. Booqasho dhawaan aan ku tegay, qof dumar ah ayaa soo gashay qolka la isku qurxinayey oo ku dhawaaqday in uu aad u kulul yahay. Intay indhashareerkeedii iska siibtay, lebbiskeedii dheeraa, koodhkii yaraa ee ay xidhnayd iyo dhammaan noocyada kale ee dhar hoose ahaa ee ay qabtay.
Waxaan rajaynayaa in aanan gabadhan mar dambe kula kulmi doonin suuqa xoolaha iyo in mindiyaha kaliya ee meel ii dhow iga soo gaadhaa ay noqdaan uun kuwa loo adeegsanayo in lagu muujiyo xarriijimaha qurxoon ee xinnuhu jidhkayga ku dhigay
Previous articleGudoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Hiiraan Farxaan Cumar Arte ayaa fariintan u dirtay Madaxweynaha cusub Hassan Sheikh Mohamud👇👇
Next articleCuntooyinka mustaqbalka: Cuntooyinka la isticmaali doono marka la gaaro sanadka 2050
Taladii xabsiga lagu siiyay atoore Sanjay Dutt ee sida weyn u...